အမေရိကန်က မြောက်ကိုးရီးယားကို အမှန် တကယ် ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်တော့မည်မှာ သေချာနေပြီလား??? – Lat Khat Than
အမေရိကန်က မြောက်ကိုးရီးယားကို အမှန် တကယ် ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်တော့မည်မှာ သေချာနေပြီလား???
ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က မိန့်ခွန်း
ပြောကြားရာမှာ မြောက်ကိုးရီးယားကို အမြင့်ဆုံးဖိအား
U.S. security checks အားလုံးကို သဘောတူလက်
သူတို့ရဲ့ နျူကလီယာရည်မှန်းချက်ကို ဆက်လက်
ဒါကြောင့် အမေရိကန်တို့က မိမိတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့
ရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအမ်ကို Shockရသွားစေ
မယ့် “Bloody nose” မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေနဲ့ အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်သွားနိုင်ကြောင်း
မြောက်ကိုးရီးယားကို ‘ Bloody nose’ attack
မကြာမီ အချိန်မရွေး တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြ
ပြီး အချို့ကတော့ ထရမ့်အနေနဲ့ ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး လို့ဆိုပါတယ်။
အမှန်တကယ် စစ်ဖြစ်လာခြင်းရှိမရှိကတော့ တကမ္ဘာလုံး က စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြပါတယ်ဗျာ။
မူရင်းလင့် ကြည့်ရှု့ ရန်နှိပ်ပါ >>> http://wikileaksnews.co/sure-looks-like-us-actually-going-bomb-north-korea/
It Sure Looks Like The US Is Actually Going to Bomb North Korea
(AM) During his first State of the Union address on Tuesday, Donald Trump pledged the United States would continue its “campaign of maximum pressure” against North Korea.
Meanwhile, the Washington Post ran an opinion piece written by the man who was, until recently, set to become the U.S. ambassador to South Korea.
A ‘ Bloody nose’ attack on North Korea is not happening anytime soon
အမရေိကနျက မွောကျကိုးရီးယားကို အမှနျ တကယျ ဗုံးကွဲ တိုကျခိုကျတော့မညျမှာ သခြောနပွေီလား???
ပွီးခဲ့တဲ့ အင်ျဂါနကေ့ သမ်မတဒျေါနယျထရမျ့က မိနျ့ခှနျး
ပွောကွားရာမှာ မွောကျကိုးရီးယားကို အမွငျ့ဆုံးဖိအား
U.S. security checks အားလုံးကို သဘောတူလကျ
သူတို့ရဲ့ နြူကလီယာရညျမှနျးခကျြကို ဆကျလကျ
ဒါကွောငျ့ အမရေိကနျတို့က မိမိတို့နိုငျငံသားတှရေဲ့
ရီးယားခေါငျးဆောငျ ကငျဂြုံအမျကို Shockရသှားစေ
မယျ့ “Bloody nose” မဟာဗြူဟာမွောကျလကျနကျတှနေဲ့ အပွငျးအထနျ တိုကျခိုကျသှားနိုငျကွောငျး
မွောကျကိုးရီးယားကို ‘ Bloody nose’ attack
မကွာမီ အခြိနျမရှေး တိုကျခိုကျနိုငျတယျလို့ဖျောပွခဲ့ကွ
ပွီး အခြို့ကတော့ ထရမျ့အနနေဲ့ ဒီလိုလုပျမှာမဟုတျဘူး လို့ဆိုပါတယျ။
အမှနျတကယျ စဈဖွဈလာခွငျးရှိမရှိကတော့ တကမ်ဘာလုံး က စိတျဝငျစားလကျြရှိကွပါတယျဗြာ။
မူရငျးလငျ့ ကွညျ့ရှု့ ရနျနှိပျပါ >>> http://wikileaksnews.co/sure-looks-like-us-actually-going-bomb-north-korea/
ရုရှား စစ်လေယာဉ်တွေကို ဂျပန်နိုင်ငံအနီး အငြင်းပွားကျွန်းဆွယ်မှာ ဖြန့်ကြက်ချထားရန် ရုရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အမိန့် ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရင်္န်စတဲ့သဘောဖြစ်နေလား???